URamaphosa ufuna bangavotelwa abakhohlakele
Ethula inkulumo kugujwa uSuku lweNkululeko izolo eFree State, umengameli Cyril Ramaphosa unxuse izakhamizi zakuleli ukuba zingabavoteli ababhubhudla imali yomphakathi, uma sekuvotwa ngo-Okthoba. Isithombe: Jairus Mmutle/GCIS
Sabelo Nsele | April 28, 2021
UMENGAMELI Cyril Ramaphosa unxuse abavoti ukuba bakhombise ulaka lwabo ngokungabavoteli abakhohlakele okhethweni lohulumeni basekhaya.
Ethula inkulumo kugujwa uSuku lweNkululeko izolo eFree State, uRamaphosa unxuse izakhamizi zakuleli ukuba zingabavoteli ababhubhudla imali yomphakathi, uma sekuvotwa ngo-Okthoba.
URamaphosa utshele abebethamele umgubho ukuthi ukwehliswa ngemilenze kwezimali zomphakathi kubambezela ukulethwa kwezidingo zomphakathi.
URamaphosa uthe lolu khetho, olubhekwe ngamehlo abomvu, luzonikeza izakhamizi zakuleli ithuba lokuthi zikhombise ukungahambisani nenkohlakalo.
“Ngiyaninxusa ukuba nikhombise ngevoti lenu, ukungahambisani nenkohlakalo, ukweba nokwehliswa ngemilenze kwezimali, okufanele zihlomulise nina eniyizakhamizi.
“Ivoti yisona sikhali sethu esingakwazi ukushintsha ngaso impilo yethu, siphucule imiphakathi yethu. Ngiyaninxusa ukuba nibhekisise kahle kulabo abazobe bengenele ukhetho, ukuthi yibaphi abazokwazi ukunisebenzela ngokungakhathali.”
URamaphosa uthe nakuba leli lathola inkululeko eminyakeni engu-27 edlule, kodwa kuningi okusadinga ukwenziwa ukushintsha impilo yabantu.
URamaphosa uthe inkohlakalo nokungawenzi ngendlela umsebenzi kwabasezikhundleni, yikho okubambezela ukuthi kushintshwe impilo yabantu ngaphansi koMbuso wentando yabantu.
“Akukwazi ukuthi emuva kweminyaka engu-27 sathola inkululeko, kodwa abantu basantula izidingo ezimqoka ezifana namanzi nokuthuthwa kwendle ngenxa yokwahluleka ukuhlela noma ukusebenza, ukukhwabanisa nenkohlakalo.
“Akukwazi ukuthi abantu kabakwazi ukuthola izindlu ezisezingeni, imfundo nezempilo ngenxa yokuthi labo okufanele balethe izidingo ebantwini kabanendaba nemisebenzi yabo.”
Khona manjalo, uNdunankulu waKwaZulu-Natal uMnuz Sihle Zikalala, uthe nakuba kukuningi osekuzuziwe kusukela leli lizwe lathola inkululeko kodwa ziningi izinselelo ezisabhekene nezwe.
UZikalala ubale udaba lokukhuliswa komnotho, ukudalwa kwamathuba emisebenzi, ukulwa nobugebengu nezidakamizwa njengezinye zezinselelo okufanele kubhekwane nazo.
UZikalala ukusho lokhu ngesikhathi kunomgubho woSuku lweNkululeko obuhlelwe wuhulumeni wesifundazwe, oHlange eNanda.
OHlange yilapho okwavotela khona umengameli wokuqala ngaphansi kwentando yeningi, uMnuz Nelson Mandela ngo-1994.
Le ndawo kuqhamuka kuyo umengameli wokuqala we-ANC, uDkt John Langalibalele Dube.
UNgqongqoshe wamaPhoyisa, uMnuz Bheki Cele, ongomunye wababehambele umgubho, ukhale ngobugebengu kule ndawo.
UCele uthe le ndawo imphathisa ngekhanda njengoba ihamba phambili ngamacala okudlwengula.
OMUNYE wabebehambele umgubho woSuku lweNkululeko obuhlelwe wuhulumeni wesifundazwe saKwaZulu-Natal, eNanda izolo Isithombe: SITHUNYELWE
BEKUPHUME nesinedolo emgubhweni woSuku lweNkululeko eNanda izolo Isithombe: SITHUNYELWE
UNdunankulu waKwaZulu-Natal, uMnuz Sihle Zikalala, ethula inkulumo emgubhweni woSuku lweNkululeko eNanda Isithombe: SITHUNYELWE